Samachar Batika || News from Nepal » को हुन सप्तर्षि ? थाहा पाउनुहोस
को हुन सप्तर्षि ? थाहा पाउनुहोस
नेपाली समाजमा गोत्रको प्रचलन अहिलेसम्म पनि धेरैले मान्दै आउने संस्कारमध्ये एक हो । ती सबै गोत्रहरू कुनै न कुनै ऋषिको नामबाट राखिएको छ । अर्थात् तिनै ऋषिको सन्तानको रूपमा गोत्रको चलन बसालिएको हो । हामीले सात जना ठूला ऋषिहरूको समूहलाई सप्तर्षि भनेर चिन्ने गर्छौं । यी सात जनाको सूचीमा न त वेद संकलन गरेको श्रेय पाउने ऋषिको नाम छ न त चर्चित महाकाव्य महाभारतका रचियताको नाम नै पाउन सकिन्छ । हिन्दु धर्मको सर्वमान्य ग्रन्थको निर्माणकर्ताभन्दा ठूला ऋषिहरू को-को हुन् त ?
ऋषिहरू भनेको शोधकर्ताहरू हुन्, जसले आत्मचिन्तन मार्फत् नयाँ कुरा पत्ता लगाउने कोसिस गर्छन् । सप्तऋषि वा सप्तर्षि भनेको सात ऋषिहरूको सामूहिक नाम हो । यी सात ऋषिहरू प्राचीन भारतका ऋषिहरू हुन्, जसको नाम वेद र अन्य हिन्दू ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। वैदिक संहितामा यी ऋषिहरूको संख्याको बारेमा कुनै विवरण छैन तर उपनिषद्मा यसलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। वेदमा यी सात ऋषिहरूलाई वैदिक धर्मको संरक्षक मानिन्छ ।
वेदको अध्ययन गरेपछि पत्ता लागेका ऋषि ​​वा तिनीहरूका वंशहरूको नाम वशिष्ठ, विश्वामित्र, कन्वा, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव र शौनक हुन्। यद्यपि पुराणमा ऋषिहरूको नाममा केही भिन्नता पाइएको छ । विष्णु पुराणले मन्वन्तरा उल्लेख गर्दै उल्लेख गरिएका सात ऋषिहरू वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र र भारद्वाज हुन् ।
यसका साथ पुराणमा केही फरक नामहरू पनि पाइन्छन्। तीमध्ये केतु, पुलाह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ र मरीचि जस्ता ऋषिहरूको नाम पाइन्छ । महाभारतमा ऋषिहरूको दुई समूह भेटिन्छन् । एउटा समूहमा कश्यप, अत्री, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ छन्। दोस्रो नामावलीमा कश्यप, वशिष्ठ, मरीची, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलाह र क्रातुको नाम छ । केही पुराणमा, कश्यप र मरीची एक मानिन्छ, जबकि कश्यप र कणव एक अर्काका पर्यायवाची मानिन्छन् । सात ऋषिको संक्षिप्त परिचय तल उल्लेख गरिएको छ ।
वशिष्ठ – वशिष्ठ मुनि राजा दशरथका कुल गुरु थिए। वशिष्ठ ऋषि दशरथका चार छोरा राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नका गुरुहरू थिए। वशिष्ठको निर्देशनमा मात्र राजा दशरथले आफ्ना चारजना छोराहरूलाई ऋषि विश्वामित्रको आदेशमा उनको आश्रममा राक्षसहरूको हत्या गर्न पठाए ।
विश्वामित्र – ऋषि विश्वामित्र मुनि बाहेक उनी एक राजा पनि थिए । हिन्दू धर्मशास्त्रमा उनी दन्त्यकथा छन् जसमा विश्वामित्रले ऋषि वशिष्ठको कामधेनु गाईलाई समात्न ल’डेका थिए। यु’द्धमा उनी ऋषि वसिष्ठको हातबाट पराजित भए। ऋषि विश्वामित्रको तपस्या तथा मेनकाद्वारा उनलाई भंग गरिएको कथा लोकप्रिय छ।
कन्वा – उनीहरूको बारेमा भनिएको छ कि हिन्दू रीतिथितिहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोम यज्ञको सुरुवात कण्व ऋषिहरूले शुरू गरेका थिए । हस्तिनापुरका राजा दुष्यन्तकी पत्नी शकुन्तला र उनका छोरा भरत कण्व ऋषिहरूको आश्रममा हुर्किएका थिए ।
भारद्वाज – सप्त ऋषिहरूमध्ये भारद्वाजको उत्कृष्ट स्थान छ। भारद्वाज ऋषि रामको समयभन्दा पूर्वका थिए । भारद्वाजका २३ मन्त्रहरू अथर्ववेदमा भेटिएका छन् । भारद्वाज स्मृति र भारद्वाज संहिताका निर्माता थिए।
अत्री – ऋषि अत्री ब्रह्माका छोरा, सोमका बुबा, कर्दम प्रजापति र अनुसुया देवहुतीकी छोरी थिइन्। ऋषि अत्रीको योगदान देशको कृषि विकासको लागि सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। यो अत्री ऋषिको बारेमा भनिएको छ कि उनीहरू सिन्धु पार गरेर पारसमा अर्थात् आजको इरानसम्म पुगेका थिए । जहाँ उनले हिन्दू यज्ञको बारेमा प्रचार गरेका थिए ।
वामदेव – ऋषि वामदेव संगीत सुरु गर्ने ऋषिका रूपमा परिचित छन् । वामदेव ऋषि गौतम ऋषिका छोरा थिए । वामदेव जन्मसिद्ध तत्ववेत्ता थिए ।
शौनक – ऋषि शौनाकले १० हजार विद्यार्थीका लागि गुरुकुल चलाएका थिए । यो विशाल गुरुकुल प्रणालीका लागि उनलाई कुलपतिको सम्मान दिइन्छ । वैदिक धर्ममा ऋषि शौनकबाहेक अरू कसैले पनि यो सम्मान पाउने गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति २१ चैत्र २०७७, शनिबार ००:३१